ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Archives - Latest Myanmar News
ပုသိမ် ဟာလဝါ (အလွယ်နည်း) (လက်ညောင်းတာ တဝက်ကျော်ကျော်လောက်သက်သာတဲ့နည်းလေး) ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (ဗန်း အသေး ၁ဗန်းစာအတွက်) ၁။ ကောက်ညှင်းမှုန့်- ၃ ခွက် ၂။ ရေ – ၄ ခွက် ၃။ အုံးနို့- ၁ ဗူး (400 ml) ၄။ နွားနို့- အုံးနို့နှင့် ဆတူ (အုံးနို့ထည့်ပြီး အဲ့ဒီသံဗူးနဲ့နွားနို့ကို ချိန်ဆထည့်ပါ။) ၅။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက် ၆။ သကြား – ၁ ခွက် ၇။ ညောင်စေးကျအောင် ကျိုထားသော ကြံသကာရည် – ၁ ခွက် ၈။ ဆီ – ခွက် တ ဝက် (သို့) … Read more
မြေအိုးမြီးရှည်ပြုလုပ်နည်း လိုအပ်သောအရာများ (1) ကြက်သား သို့မဟုတ် ကြက်အရိုး (2) မြီးရှည်အဖတ် ကြက်တောင်ပံတု အသားတု ငုံးဥ ကြွက်နားရွက်မှို ကျောက်ပွင့် ပန်းပွင့်ခြောက် ကော်ချောင်း ( ဆိုင်တွေမှာ မြေအိုးမြီးရှည်လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်ပစ္စည်း အစုံထည့်ပေးလို့ ပြောလိုက်ရင်လည်းရပါသည် (3) ပဲငပိ (4) ကြက်သွန်အနီ သံပုရာသီး ကန်စွန်းရွက် ပန်းဂေါ်ဖီ အာလူး မုန်လာဥနီ မုန်ညှင်းရွက် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ဟွာကျောင်းအမှုန့် ( ကုန်ခြောက်ဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါသည် မထည့်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဖူးနော် ) Ready made အထုပ်တွေက ဘယ်လိုချက်ထားလဲ ဘာဆိုးဆေး တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေထည့်ထားလဲ မသိနိုင်တာမို့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာအနှစ်လေးချက်လိုက်ရအောင်နော် Ready made အထုပ်နဲ့ အရသာချင်းအတော်လေးကွာတယ်လို့ အာမခံပါတယ်ရှင့် (1) မြီးရှည်အဖတ် ကြက်တောင်ပံတု … Read more
July 27, 2021 by Latest Myanmar News
ဒီနည်းကတော့ ကြော်ပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိလဲ မပျော့ပါဘူး။စားလို့လဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ကြော်စားကြည့်နော်လို့။ ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ၁။ အာလူး အကြီး – ၂လုံး ၂။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ခွဲ ၃။ ကွမ်းယာထဲထည့်တဲ့ စားထုံး – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ ပုံတပုံ ၄။ ရေ – ၃ ခွက် ခွဲ ၅။ ကြော်ရန်ဆီ ( ၁ ခွက် = 240 ml = ရိုးရိုးကော်ဖီခွက် ၁ခွက်) (ထမင်းစားဇွန်း = 1 tablespoon= 15 ml) (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း = 1 teaspoon=5ml) ပြုလုပ်နည်းလေး ၁။ ထုံးကို … Read more
ကချင် ခရမ်းချဉ်သီး ထောင်း ထောင်းနည်း
ငွေအကုန်ကျလည်းသက်သာ ထမင်းစားလည်းမြိန်စေမယ့် တမယ်ကောင်း ကချင်ခရမ်းချဉ်သီးထောင်း ကချင် ခရမ်းချဉ်သီး ထောင်း ဒီနေ့တော့ အချိန်ကလေး ရတာနဲ့ စားချင်နေတဲ့ကချင် ခရမ်းချဉ်သီး ထောင်းလေး လုပ်စားဖြစ်သွားပါတယ်။ အလွန် ပင် ထမင်းမြိန်လှတယ် ထောင်းစားချင်သူများအတွတ် ခရမ်းချဉ်သီးမှည့် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ( အနီ ၊ အစိမ်း ) ကြက်သွန်ဖြူ တို့ကို မီးကင်ပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ။ ထောင်းပြီး ဆား ၊ ကြက်သားမူန့် ( သို့ ) ဟင်းချိုမူန့် နံနံ ထည့်မွှေပါ Phyo Moh Moh Zawgyi ေငြအကုန္က်လည္းသက္သာ ထမင္းစားလည္းၿမိန္ေစမယ့္ တမယ္ေကာင္း ကခ်င္ခရမ္းခ်ဥ္သီးေထာင္း ကခ်င္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေထာင္း ဒီေန႔ေတာ့ အခ်ိန္ကေလး ရတာနဲ႔ စားခ်င္ေနတဲ့ကခ်င္ … Read more
အိမ်တွင်းဖြစ် ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ကိတ်မုန့်လုပ်နည်း အိမ်တွင်းဖြစ်ထမင်းပေါင်းအိုးကိတ်မုန့်လေး ပါဝင်ပစ္စည်း ၁.ဂျုံ=ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ခွက် ၂.သကြား=ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ဝက် ၃.နွားနို့= ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ဝက် ၄.ဆီ=ဆန်ချိန်ခွက်၃ပုံတစ်ပုံ ၅.ရှာလကာရည်=၃စက် ၆.ကြက်ဥ=၅လုံး ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ၁.ဇလုံသန့်သန့်၂လုံးအဆင့်သင့်လုပ်ထားပါ၊ကြက်ဥ၅လုံးကို အကာအနှစ်ခွဲပြီးဇလုံတစ်ခုချင်းစီထည့်ထားပါ။ ၂.ကြက်ဥအနှစ်ဇလုံ ထဲကို ဂျုံ၊ဆီ၊နွားနို့ ရောထည့်ပြီး ဂျုံလုံးလေးတွေမရှိအောင်နှယ်ထားပါ။ ၃.cream ရိုက်စက်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် ကြက်ဥအကာဇလုံထဲကိုရှာလကာရည် ထည်ပြီးခေါက်ပါ(သကြားကို၃ပုံခွဲထားပါ)၊အမြုပ်ထွက်လာရင် သကြားကိုတစ်ပုံထည့်ပေးပါ၊ အဆက်မပျက်ခေါက်ပေးရပါမည်၊အမြုပ်လေးတွေသေးပြီးဖြူဖြူလေးတွေဖြစ်ရင်သကြားနောက်တစ်ပုံထည့်ပါ၊အမြုပ်လေးတွေပျောက်ပြီးဖြူဝင်းလာပြီဆိုရင်သကြားနောက်ဆုံးတစ်ပုံထည့်ပြီးဆက်ခေါက်ပါ၊ cream ရသည့်ထိခေါက်ပါ။ Cream ဖြစ်မဖြစ်ကိုဝါးတူတစ်ချောင်းကိုအလယ်မှာစိုက်ကြည့်ပါ လဲမကျရင်cream ရပါပြီ။Cream ရိုက်စက်ရှိရင်လဲ အပေါ်ကအချိုးအတိုင်းပြုလုပ်ရပါတယ်။ creamရိုက်တာ၁၀မိနစ်ကြာပါတယ် ၄. ရိုက်ထားတဲ့ cream ကို ဂျုံနှယ်ထားတဲ့ဇလုံထဲကို ၃ခါခွဲပြီး ရောနှယ်ပေးပါ (နှယ်တဲ့နေရာမှာ ဇွန်းဖြင့်အပေါ်အောက်ဖြေးဖြေးနှယ်ပါ၊ လုံးဝမမွှေမိပါစေနဲ့နော် ) ၅. ထမင်းပေါင်းအိုးအောက်ခြေကို ဆီသုပ်ထားပါ နှယ်ထားတဲ့အနှစ်ကို အပေါ်ကနေ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ့ကိုလောင်းချလိုက်ပါ ၊ပြီးရင် အိုးကို ၅/၆ချက်လောက် … Read more
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ချက်နည်းလေးပါ အဆင်ပြေအောင် (2) နည်းတင်ပေးထားပါတယ်နော် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် ဂျုံခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ကြက်သား ၊ မှိုခြောက် ၊ ပန်းခြောက် ၊Sausage(ကြိုက်လို့တမင်ထည့်တာပါ၊ သာမန်အားဖြင့်မထည့်စားတတ်ကြပါဘူး ) ၊ ကော်မှုန့် ၊ ဘဲဥ ၊ ကန်စွန်းရွက် ၊ ပဲငံပြာရည် ၊ ဆား ၊ သကြား နဲ့ ရေတို့ အဓိက လိုအပ်ပါတယ် ။ ငရုပ်ကောင်း ၊ ကြက်သွန်ကြော်နဲ့ ငပိထောင်းလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ် ။ ပထမဆုံး ဂျုံခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ပျော့အိလာစေဖို့ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေထဲ ခဏနှစ်ထားပေးရပါမယ် ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနေထား အပျော့မာကိုကြည့်ပြီး ခေါက်ဆွဲကို ပြန်ဆယ်ထားကာ …ရေအေးထဲ နှစ်ပြီး ခဏ … Read more
ရောဂါကူးစက်မှု များပြားနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းမွန်အောင် အိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူ ကြက်ပေါင်းစွပ်ပြုတ်လေး လုပ်စားကြရအောင်နော်… ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ကြက်ပေါင်းစွပ်ပြုတ်လုပ်နည်းလေး ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၁။ ကြက်သား(မိမိနှစ်သက်ရာအစိတ်အပိုင်း) – ၁ ပိဿာ(ဗမာကြက်လဲရပါတယ်) ၂။ ဂျင်း – လက်နှစ်ဆစ်ခန့် ၃။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၁၀ မွှာ(အကြီး) ၄။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၅ ပင် ၅။ ဆား – လဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ၆။ ကြက်သားမှုန့် – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း ၇။ ပဲငံပြာရည်အနောက် – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ၈။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – အနည်းငယ် ပြုလုပ်ပုံ ၁။ ကြက်သားထဲကို ဆားတစ်ဇွန်းထည့်ပြီး ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးပါ။ … Read more
အုန်းထမင်းကို ရှမ်းဆန်နဲ့ချက်ပေးထားပါတယ်.အခုချက်တဲ့ နောင်မွန်ရှမ်းဆန်က အရမ်းမပျော့ဘဲ စီးထွေးထွေး လေးမို့ အုန်းထမင်းတို့ ထောပတ်ထမင်းတို့ပဲထမင်းတို့ချက်ရင်သိပ်လိုက်ဖက်ပါတယ်. အမကတော့ ဒံပေါက်ထမင်းတစ်မျိုးပဲ ဘာစမာတီဆန် သို့မဟုတ် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်ဖြင့်ချက်ပါတယ်..အုန်းထမင်းတို့ထောပတ်ထမင်း ပဲထမင်းတို့က ချက်တဲ့ဆန်အရွေးမှားရင် ကြမ်းရှရှကြီးဖြစ်သွားရင် စားရတာအရသာပျက်တတ်လို့ အခုလိုအမစိတ်ကြိုက် ရှမ်းဆန်ဖြင့်ချက်တာပါ. ချက်နည်း ရှမ်းဆန်လေးဗူး အုန်းနို့ဗူးကြီးတစ်ဗူး အုန်းနို့မူန့် တစ်ထုပ်.အုန်းနို့အမူန့်က အိမ်မှာဝယ်ထားတာကြာပြီမို့အပိုရှိလို့ထည့်လိုက်တာပါ.မထည့်လည်းရပါတယ်နော် နေကြာဆီ တစ်ဆယ်သား ဆား teaဇွန်း နှစ်ဇွန်းခွဲ ( အငန်အရသာပိုကြိုက်ကပိုထည့်ပါ) သကြား ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းခွဲ ကြက်သွန်နီ သုံးလုံးလေးစိတ်စိတ်ထားပါ။ ချက်မည်ဆိုပါက. ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ ဆန်ဆေးပြီးထည့်.အပေါ်က ပါဝင်ပစ္စည်း တွေအကုန်ထည့်ပါ.ပြီးရင်ရေချိန်ကတော့ ခါတိုင်း ထမင်းချက်ရင်ရေထည့်သလိုပဲထည့်ပါ။ မတိုင်းတတ်ရင် ဆန်ပေါ်ရေလက်တစ်ဆစ်ခွဲပိုပိုလေးတိုင်း၍ထည့်ပါ.တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆန်ကြောမတူ၍မိမိတို့ဖာသာ ချင့်ချိန်ပြီးထည့်ပါရှင်..အခုပြောတဲ့ရေချိန်ကတော့ ရှမ်းဆန်အချိုးပါ. အားလုံးထညျ့ပွီးရငျ အရသာသမသှားအောငျဇှနျးဖွငျ့မှှပေေးပွီးအဖုံးပိတျပွီး ခါတိုငျးထမငျးခကြျသလိုပဲခလုတျနှိပျထားလိုကျရငျရပါပီ.ခလုတျတကျသှားရငျပလပျကျိုခကြျခွငျးမဖွုတျသေးပဲ ၁၅မိနဈခနျ့နှပျထားပေးပါ. အချိန်စေ့မှ အဖုံးဖွင့်ပြီးထမင်းကိုအပေါ်အောက်ခပ်ဖွဖွမွပေးလိုက်ပါ.ဒါမှထမင်းတွေကအခဲလိုက်ကပ်မနေဘဲဆန်ချောင်းလေးအတိုင်းပွပွလေးဖြစ်နေမှာပါရှင်..အရသာမြည်းကြည့်လိုက်ရင် … Read more
အိမ်နေရင်း ပျင်းနေရင် သုပ်စားကြမယ်
အိမ်ထဲမှာနေရင်း စားကြမယ် ပဲပင်ပေါက်အာလူးသုပ်ချဉ်ငန်စပ်စပ် ပဲပင်​ပေါက်​ကို​လှော်​…အာလူးပြုတ်​…ဆီချက်​..…အချိုမှုန့်..… ပုဇွန်‌ခြောက်မှုန့်..dashi….ငြုပ်ကျက်မှုန့်​.. ပဲကျက်​မှုန့်​..​ရှောက်​ရွက်​.. နံနံပင်.. ကြက်​သွန်​နီ.. မန်​ကျီးရည်​..တို့နဲ့နယ်​ပီးသုပ်လိုက်ပါ..… အားလုံး ထမင်းမြိန်​ပါ​စေ.. ပဲပင်ပေါက်အာလူးသုပ်ချဉ်ငန်စပ် ပဲပင်ပေါက်ကိုလှော်… အာလူးပြုတ်… ဆီချက်..… အချိုမှုန့်..… ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်..dashi….ငြုပ်ကျက်မှုန့်.. ပဲကျက်မှုန့်.. ရှောက်ရွက်.. နံနံပင်.. ကြက်သွန်နီ.. မန်ကျီးရည်..တို့နဲ့နယ်ပီးသုပ်ပါ..… အားလုံး ထမင်းမြိန်ပါစေ.. ခရစ်ဒစ် Zawgyi အိမ္ထဲမွာေနရင္း စားၾကမယ္ ပဲပင္ေပါက္အာလူးသုပ္ခ်ဥ္ငန္စပ္စပ္ ပဲပင္​ေပါက္​ကို​ေလွာ္​…အာလူးျပဳတ္​…ဆီခ်က္​..…အခ်ိဳမွုန႔္..… ပုဇြန္‌ေျခာက္မွုန႔္..dashi….ျငဳပ္က်က္မွုန႔္​.. ပဲက်က္​မွုန႔္​..​ေရွာက္​ရြက္​.. နံနံပင္.. ၾကက္​သြန္​နီ.. မန္​က်ီးရည္​..တို့နဲ႔နယ္​ပီးသုပ္လိုက္ပါ..… အားလုံး ထမင္းၿမိန္​ပါ​ေစ.. ပဲပင္ေပါက္အာလူးသုပ္ခ်ဥ္ငန္စပ္ ပဲပင္ေပါက္ကိုေလွာ္… အာလူးျပဳတ္… ဆီခ်က္..… အခ်ိဳမွုန္႔..… ပုဇြန္ေျခာက္မွုန္႔..dashi….ျငဳပ္က်က္မွုန္႔.. ပဲက်က္မွုန္႔.. ေရွာက္ရြက္.. နံနံပင္.. ၾကက္သြန္နီ.. မန္က်ီးရည္..တို့နဲ႔နယ္ပီးသုပ္ပါ..… အားလုံး ထမင္းၿမိန္ပါေစ.. ခရစ္ဒစ္
ကစောသီး ငပိထောင်း ထောင်းနည်း
June 30, 2021 by Latest Myanmar News
ထောင်းစားချင်လို့သူများဆီက ကူးလာမိပြီး…ခုက ရာသီချိန်ဆိုတော့…. စိတ်ဝင်စားသူတွေထောင်းစားကြည့်ပါနော်…. ခရမ်းကစော့ သီး လေး ငပိထောင်း ငပိထောင်းဖို့လိုအပ်တာက. ငရုပ်သီးစိမ်းတောင့် “မျှင်ငပိ ” ခရမ်းကတော်သီး ” ကြက်သွန်ဖြူ ” သံပုရာသီး ” ပုဇွန်ခြောက် သို့မဟုတ် ပုဇွန်အစိမ်း ၂ကောင်၃ကောင်လောက်ကို အခွံခွာပြီးလှော်ထားပါ “ဆား ၊အချိုမှုန်၊့ ငပိကို အရင် မီးကင်ထားပါ ” ပုဇွန်ကို လှော်ထားပါ ပုဇွန်ခြောက်ဆိုရင်ရေစိမ်ထားပါ ” ကြက်သွန်ဖြူ ကို အခွံခွာ အရှည်လိုက်လေး မပါးတစ်ပါးလေးလှီးထားပါ ငရုပ်သီးစိမ်းကို အညှာချွေ ခရမ်းက​စော့သီး ကို အညှာချွေ သံပုရာသီးတစ်စိတ် ခရမ်းကစော့ သီးရယ် ငရုပ်သီးစိမ်းရယ် ကြက်သွန်ဖြူရယ်အကုန် အိုးတစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး လှော်ပေးပါ အကုန်အညို ရောင်သမ်းသည်အထိ လှော်ပေး ပါ … Read more